Buyela kwi-Green Gardens, iFama eneNdlela yokuziphatha - I-Airbnb
Buyela kwi-Green Gardens, iFama eneNdlela yokuziphatha
Ifama sinombuki zindwendwe onguLaiju
ITHUBA LOKUBA AMAVA OKUNGENDLELA YINKQUBO YERUSTIC
UKUHAMBA NGAPHANDLE KOKULINDELEKILEYO: IGreen Gardens yiFama yase-Ahimsa egcinwe ngokweNqobo yi-TGG Foundation, isisa sophuhliso lwasemaphandleni ukudala amathuba okuziphilisa. Ngumsebenzi ongengoworhwebo kwaye ubuncinci bokuhlala ziintsuku ezi-4.
1. Umntu kufuneka afumane uBhaliso lweMisebenzi yoLuntu oluJongene neResponsible (RHM) phambi kokufika kwakhe.
2. Abo bafuna ubomi obucothayo kufuneka bakhethe kuphela.
3.Sityhafisa iihambo zokuthandana.
Ifama yethu ithandwa ngabantu abafuna ukuzipholela, ukudibana nabo, ukungenzi nto, ukuzonwabisa ngobomi beekhemikhali, ukonwabela ukutya kwabantu abangayityiyo inyama, ukuzonwabisa ngobomi basezilalini, ukuphilisa ingqondo, umzimba nomphefumlo wakho kwindalo
Sikhuthaza ukuhlala ixesha elide, ngeveki (isaphulelo se-5%) okanye ngenyanga (isaphulelo se-20%) kwindawo yokuphumla ukuze ukwazi ukuphazamisa ingqondo nomzimba wakho ngokupheleleyo ngokuzibandakanya ne-Yoga nokucamngca, ukwenza izinto ezilula, ukuhamba ngeenyawo kwindalo, ukuchitha ixesha nezilwanyana, ukonwabela umculo weentaka, ubomi obungenaekhemikhali kunye nokunye okuninzi...
Eli thuba liza kuwe njengenxalenye Yento Enokonwatyelwa Yokuphila Engayonakalisiyo Yezinto Onokuzonwabela, ezilungiselelwe Ababhalisi Abanyanisekileyo. Zonke iindwendwe ze-AirBnB zicelwa ukuba ziqokelele inkcazelo efumanekayo ngokukhangela "iMission Yobuntu Efanelekileyo" kwi-intanethi kwaye ukuba ziyavumelana nekhowudi yokuziqhelanisa kunye ne-Ethos ye-GG, zibhalise ngokubhatala imali yokubhalisa ye-Rs.500/ ($ 10) ukuze ufumane inombolo yokubhalisa ebomini bexesha elinye.
Imali oyibhatelwe nguwe nge-Airbnb iphathwa njengomnikelo. i-20% yayo isetyenziselwa iindleko zeofisi, i-40% yeMission Yokuphila, i-40% ye-Rupak Dayalwagen.
Ngexesha lokuhlala kwakho, ukuba ufuna nayiphi na inkonzo yokucoca indlu/inkonzo yokuhlamba impahla/utshintsho lwamashiti, iza kutsalwa imali eyongezelelekileyo.
Umbutho WABANTU ONENKATHALO ngamafutshane: Sikholelwa ukuba INJONGO yokunceda umntu kunye nokwenza ubomi bakhe bube ngcono kufuneka ziqhutywe. Kunokunceda ukuba wonke umntu oncedakala kakuhle anganikela nje inxalenye encinci yokutshintsha izinto ezingafanelekanga ezifumaneka ekuhlaleni ukuze kuphuculwe ukufundiswa, ukuphila, impilo kunye nobubele kubo bonke. Yimbopheleleko yethu ukubonelela ngezinto ezincinci eziyimfuneko ukuze sikwazi ukwenza ubomi obuhloniphekileyo. Abantu abo bagcina ubuntu kwi-polarising ideologies banokubhaliswa phantsi kwe-rhm.
PHAWULA: Into onokuyonwabela engayonakalisiyo indalo ayenzelwanga izinto ezenziwayo.
Silandela umgaqo-nkqubo weNkunkuma enguZero efama, inkunkuma engonakaliswayo ilawulwa kakuhle ngaphakathi efama, nangona kunjalo yonke enye inkunkuma ayikhuthazwa ukuba ingene efama kwaye ukuba ingenisiwe kufuneka ikhutshwe efama xa uphuma. Kukho inkqubo yokulahla ekhoyo e-Ambalavayal (i-4km ukusuka kwifama) kwiimveliso ezingenakonakala ezifana neeplastiki.
Umbuki zindwendwe ngu- Laiju
Ndihlala kwiofisi ye-TGG Foundation, emalunga ne-6.5 kms ukusuka kwiFama yaseGreen Gardens. Ngexesha lotyelelo londwendwe ndiyaqinisekisa ukuba ndiyadibana kwaye ndinxibelelane nabo. Ndikwafumaneka 24/7 ngemobile naku watsapp.